Fetibe Vaovaon’ny Filma sy Radio ao Amerika Afovoany Miresaka ny Tolona Ataon’ny Vazimba Teratany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Jona 2015 9:51 GMT
Ny fetin'ny filma sy radiom-piarahamoninadia natokana hampielezana ny media vaovao izay mampiseho ny tolona ataon'ny vondrom-piarahamoninavazimba teratany isan-karazany amin'ny fiarovanany taniny sy ho fikolokoloana ny kolontsainy. Saripika nalaina avy amin'ny pejy facebook “El lugar que habitamos” ary nahazoana alalana ny famoahana azy.
Nanomboka tamin'ny tapatapaky ny volana ny fetiben'ny Radio sy ny Film-piarahamonina ao Amerika Afovoany, nisokatra tamin'ny filamatra hoe, “El Lugar que Habitamos” (Ny Toerana Onenantsika). Tao anatin'ny efatra andro, ny 10 ka hatramin'ny 14 jona, nitsidika vondrom-piarahamonina folo tao Oaxaca, Meksika ny fetibe. Amin'ny manaraka ny fetibe dia hitsidika ao anatin'ny efatra andro hafa an'i Mérida ka hatrany Chiapas mialoha ny hitodihana mankany Kiobà, Goatemalà, Honduras, El Salvador, ary Nikaragoà.
Ny programan'ny fetibe no manolotra izao fehinkevitra manaraka izay amin'izay azon'ny mpanatrika antenaina:
Manoloana ireo orinasam-pitrandrahana,solika, fanaovam-panafody, fanapoizinam-pambolena, angovo avy amin'ny rivotra ary ny fizahantany—avy amin'ny tetikasam-pampandrosoan'ny fikambanam-pamatsiambola iraisampirenena, ireo mpifehy ny fampitam-baovao hoan'ny daholobe ary ireo tafika ofisialy sy tsy ofisialy mitady hanery ny lôjikany mahafaty aminay—izahay, mpampifandray sy mpanao gazety izay miaina sy mijoro eto Amerika afovoany, manandratra ny tantarany, ny kolontsaina ary ny fiainana, ijoroanay vavolombelona, amin'ny alalan'ireo eritreritra voaangona ato amin'ity fetibe ity, ny herivaikan'ny fangejana sy ny fanendahana, ny tolona tsy mitsahatra ataon'ny vahoakanay, ary ny hankaton'ny fanantenana.
Ny fetibe dia velomin'ny Ojo de Agua Comunicación, misahana manokana amin'ny fampiofanana, famokarana, ary ny fampielezana haino aman-jery hoan'ny vondrona sy fiarahamonina bitika. Nosokafana tamin'ny alalan'ny fandefasana ny lahatsarim-panadihadiana Huicholes: Lós Últimos Guardianes del Peyote (Huicholes: Ireo mpiambina faran'ny Peyote), sarimihetsika iray miresaka ny tolona ara-panahy sy ara-politikan'ny vahoaka Huichol, ny hetsika. Talohaloha kokoa tamin'ity taona ity dia tonga tany Eoropa ihany koa ny hetsika.
Nilaza ny tahaka izao nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety i Paola Morales, mpandrindra ny fetibe :
Harantin'ny fetibe ny asan'ireo mpamokatra radio, filma ary lahatsary manome feo ny toe-draharaha atrehin'ny fokonolona maro ao Amerika Latinina: fiarovana ny sisintaniny, harena ankibon'ny tany, olana zon'olombelona ary ny miralenta.
Lasa miolaka ho fisarihana ara-haino aman-jery sy ara-pandraisam-peo fanao radio ny fetibe. Ny teo aloha dia ahitana fantina fandaraharana radio 13 avy amin'ny faritra maro ao Amerika Latinina, navondrona ho fandaharana maharitra ora roa izay halefa an-tserasera sy avoaka CD hoan'ny radiom-piarahamonina sy mahaleotena any amin'ny toerana rehetra andehanan'ny fetibe:
“Ny Toerana Onenantsika” dia sehatra hoan'ny fiarahamonina tsy voaisa, mainty, vazimba teratany, feminista, ary fandraisam-peo fandefa radio, ary maro amin'izy ireo no voaofan'ny tambajotra manolotena ho amin'ny marimaritra iraisana eo amin'ny fiarovana ny aina sy ny sisintany.
“Ny Toerana Onenantsika” dia mampiditra ny santionan'ny vokatra fandefa radio izay nangonina avy amin'ny faritra maro ao Amerika Afovoany sy Abya Yala. Ireo fanadraisam-peo fohy nampiarahana ho programa maharitra ora roa noahitantsika ny fimaroan'ny fandraisana an-tanana, tolokevitra, ary fijery avy amin'ny fomba fiainana mikendry ny fiarovana ny planeta .
Ny isan'ny vokatra ao amin'ny sampana haino aman-jery dia 17, izay navondrona ao amin'ny sokajy efatra. Araka ny programa, misy ny : Contracorriente (Manohariana), izay mamelabelatra ny ohatra ara-paritry ny fitsiponana, ny fakana hoan'ny tena ary ny fampiasana indray, ny La primera semilla (Santa-bokatra), fanandratana ny fijerin'ny vehivavy, ny Nuevas generaciones (Taranaka Vaovao), momba ny sehatra natokana hoan'ny ankizy sy ny tanora; ary ny Turbulencias (Tabataba), sampana miresaka ireo toe-draharaha mampanahy amin'ny fiarovana ny sisintany, fiarahamoninaary ny kolontsain'ny fiarahamonina isankarazany.
Ny fetiben'ny radio, sy ireo sary avy amin'ny lanonam-panokafana ary ny rakitsary avy amin'ny lahatsary fanadihadiana, dia azo jerena ao amin'ny tranonkalan'ny Ojo de Agua Comunicación.